I-China Cell ngqo i-RT qPCR Kit yoMvelisi kunye noMthengisi | Foregene
Uvavanyo lwe-SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold)
Intsholongwane yeTyhubhu yoThutho oluphakathi
Ikhithi yePlasmid Mini ngokubanzi
I-Lnc-RT IHeroᵀᴹ I (ene-gDNase) (Isimaphambili esikhulu se-strand yokuqala ye-cDNA synthesis evela kwi-IncRNA)
I-QuickEasyᵀᴹ i-RT ngqo kwi-QPCR Kit-I-SYBR eluhlaza mna nge-RT ngqo ye-cell-qPCR isebenzisa iiseli ezili-10-,000,000
Izilwanyana zezilwanyana ngokuthe ngqo kwi-PCR Kit
Umsila weMouse ngqo kwi-PCR Kit
Iseli ngqo ye-RT qPCR Kit
I-2019-nCOV ye-Nucleic acid detection kit (indlela ye-multiplex PCR fluorescent probe)
I-SARS-CoV-2 Antigen Kit yokuHlola (iColloidal Gold)
Idilesi: I-D2, ibhlokhi A, iziko lotyando lwezonyango ezintathu, inombolo ye-18, indlela yasemantla eBhayi, isitalato iYongning, 611130, Chengdu, China
Umnxeba: + 86-28-86050301
Ihlokondiba / Whatsapp / Wechat: + 86-13880676215
Le khithi isebenzisa inkqubo ekhethekileyo ye-lysis buffer enokuthi ikhuphe i-RNA ngokukhawuleza kwiisampulu zeseli ezenzelwe i-RT-qPCR reaction, ngaloo ndlela ishenxisa inkqubo yokuhlanjululwa kwexesha kunye ne-RNA. Itemplate yeRNA inokufumaneka kwimizuzu nje esi-7. Umxube we-5 × ngqo we-RT kunye ne-2 × ngqo qPCR Mix-SYBR reagents ebonelelwe yikiti inokufumana ngokukhawuleza nangokufanelekileyo iziphumo ze-PCR zexesha lokwenyani.
I-5 × i-Direct RT Mix kunye ne-2 × i-Direct QPCR Mix-SYBR ine-inhibitor eyomeleleyo yokunyamezelana, kwaye i-lysate yeesampulu inokusetyenziswa njenge template ye-RT-qPCR ngqo. Le khithi iqulethe i-RNA ekhethekileyo yokuhlangana okuphezulu kwe-Foregene reverse transcriptase, kunye ne-Hot D-Taq DNA polymerase, i-dNTPs, i-MgCl2, i-reaction buffer, i-PCR optimizer kunye ne-stabilizer.
200×20μI-Rxns, i-1000×20μl IiRxns
5 × Umxube we-RT ngqo
2 × ngqo QPCR Mix-SYBR
Idayi yesalathiso ye-50 × ROX
■ Ilula kwaye iyasebenza: ngetekhnoloji ye-Cell Direct RT, iisampulu zeRNA zinokufunyanwa kwimizuzu nje esi-7.
The Imfuno yesampulu incinci, ukuya kuthi ga kuvavanyo lweeseli ezili-10.
■ Ukuhamba okuphezulu: inokukhawuleza ibone i-RNA kwiiseli ezikhuliswe ngo-384, 96, 24, 12, 6, 6-iipleyiti.
■ I-DNA Eraser inokuzisusa ngokukhawuleza iijenome ezikhutshiweyo, ukunciphisa kakhulu ifuthe kwiziphumo zovavanyo ezilandelayo.
■ Ukulungiselela i-RT kunye ne-qPCR inkqubo yenza ukuba amanyathelo amabini e-RT-PCR abuyisele ukukhuphela ngakumbi ngakumbi kwaye i-PCR icace ngakumbi, kwaye inganyangeki kwi-RT-qPCR reaction inhibitors.
Ubungakanani besicelo: iiseli ezikhulisiweyo.
-I-RNA ekhutshwe sisampulu ye-lysis: isebenza kuphela kwi-template ye-RT-qPCR yale khithi.
-Ikiti inokusetyenziselwa ezi njongo zilandelayo: Uhlalutyo lwentetho yemfuza, ukuqinisekiswa kwe-siRNA-Mediated gene yokuthomalalisa ukusebenza, ukuvavanywa kweziyobisi, njl.
Ukugcinwa kunye nobomi beShelf
Icandelo I lale khithi kufuneka ligcinwe nge-4 ℃; Icandelo II kufuneka ligcinwe kwi -20 ℃.
I-Foregene Protease Plus II kufuneka igcinwe ngo-4Ewe, musa ukubanda -20 ℃.
Reagent 2×I-qPCR Mix-SYBR ngqo kufuneka igcinwe -20℃ ebumnyameni; ukuba isetyenziswa rhoqo, inokugcinwa kwi-4℃ yokugcina okwethutyana (yisebenzise zingaphelanga iintsuku ezili-10).
Egqithileyo I-Lnc-RT Heroᵀᴹ I (Nge-gDNase) (Isimaphambili esikhulu se-strand cDNA synthesis evela kwi-lncRNA)
Okulandelayo: Ixesha Lokwenene PCR Easyᵀᴹ-Taqman
Iselfowuni ngqo Rt-Pcr
Iselfowuni ngqo kwiRna yokulungiselela iRt Pcr
Iiseli ngokuthe ngqo inyathelo elinye kwiKhithi yePcr yePrt